Abavelisi bezifo ezosulelayo kunye nababoneleli-kwiFektri yaseChina yezifo ezosulelayo
Uvavanyo lwe-HSV 12
INTSHAYELELO HSV yimvulophu, intsholongwane ehambelana ne-DNA morphologically efanayo namanye amalungu ohlobo lweHerpesviridae. , ulusu, iliso kunye ne-genitalia, Usulelo lwenkqubo ye-nervous system (meningoencephalitis) kunye nosulelo ngokubanzi ngokubanzi kwisifo se-immunocompromised patient siyabonakala, nangona mo ...
Uvavanyo olukhawulezayo lweStrongStep® Neisseria gonorrhoeae Antigen kukukhawuleza kwe-immunoassay ye-lateral yokufumana ubungqongqo bokuqikelela kwe-Neisseria gonorrhoeae antigen kwi-urethral yamadoda kunye ne-swab yomfazi wesibeleko. Izibonelelo ezichanekileyo Ukuziva okuphezulu (97.5%) kunye nokucaciswa okuphezulu (97.4%) ngokweziphumo zamatyala ali-1086 ezilingo zonyango. Ukukhawuleza kuphela Imizuzu eli-15 efunekayo. Inkqubo esebenziseka ngokulula yomntu ukufumana i-antigen ngqo. Ngaphandle kwezixhobo Izibhedlele zithintela imithombo yolwazi okanye ikliniki ...
UKUSETYENZISWA NGOKUSETYENZISIWEYO Isixhobo seStrongStep® HPV 16/18 seAntigen Rapid Test sisixhobo esikhawulezayo sokubonwa kweHPV 16/18 E6 kunye ne-E7 oncoproteins kwimifuziselo yabasetyhini yomlomo wesibeleko. Le khithi yenzelwe ukuba isetyenziswe njengoncedo ekuchongeni isifo somhlaza wesibeleko kunye nomhlaza. INTSHAYELELO Kumazwe asaphuhlayo, umhlaza womlomo wesibeleko ngoyena nobangela wokufa okunxulumene nomhlaza kwabasetyhini, ngenxa yokunqongophala kokuphunyezwa kovavanyo lokuvavanywa komhlaza wesibeleko kunye ...
UKUSETYENZISWA KWENKQUBO IStrongStep® Strep Isixhobo soVavanyo olukhawulezileyo sisimo esikhawulezayo sokuchongwa kweQela A iStreptococcal (Iqela A Strep) iantigen evela kumzekelo womqala njengoncedo ekufumaniseni iQela A Strep pharyngitis okanye isiqinisekiso senkcubeko. INTSHAYELELO IBeta-haemolytic Group B iStreptococcus ngoyena nobangela wezifo zokuphefumla eziphezulu ebantwini. Esona sifo sixhaphakileyo kwiqela le-Streptococcal pharyngitis. Iimpawu zoku, ukuba ziyekwe zinganyangwa ...
I-StrongStep® Strep B i-antigen Rapid Test yinto ebonakalayo ekhawulezayo yokubonwa komgangatho wokufunyanwa kokuzithemba kweQela B iStreptococcal antigen kwi-swab yabasetyhini. Izibonelelo ezikhawulezileyo Ngaphantsi kwemizuzu engama-20 efunekayo kwiziphumo. Ukungangenisi kokubini kwilungu lobufazi kunye nomlomo wesibeleko kulungile. Bhetyebhetye Akukho zixhobo zikhethekileyo ezifunekayo. Ubushushu begumbi lokuGcina ubuchwephesha Ubuthathaka 87.3% Ukucaciswa 99.4% Ukuchaneka kwe-97.5% CE kuphawulwe Ubungakanani beKit = iikiti ezingama-20 zeFayile: Iincwadana / iiMSDS ...
UKUSETYENZISWA KWENKQUBO StrongStep® Trichomonas Vaginalis Antigen Rapid Test yenzelwe ukufumanisa ubungakanani beTrichomonas vaginalis (* Trichomonasw) iantigens ezivela kwilungu lobufazi. Le khithi yenzelwe ukuba isetyenziswe njengoncedo ekuchongeni usulelo lweTrichomonas. INTSHAYELELO Usulelo lweTrichomonas luxanduva lwesifo esixhaphakileyo, esosulela ngokwabelana ngesondo (vaginitis okanye trichomoniasis) kwihlabathi liphela. I-Trichomoniasis ngunobangela obalulekileyo wokugula kubo bonke abaguli ...
Trichomonas vaginalis kunye neCandida
I-StrongStep® StrongStep® Trichomonas / Candida yovavanyo olukhawulezileyo lweCombo kukuhamba ngokukhawuleza kwe-immunoassay yokufumana ubuchwephesha obufanelekileyo be-trichomonas vaginalis / candida albicans antigens ezivela kwilungu lobufazi. Izibonelelo zikhawuleza kuphela imizuzu eli-10 efunekayo. Gcina ixesha kunye neendleko kuvavanyo olunye lwezifo ezibini nge-swab enye. Ukufunyanwa ngaxeshanye Yahlula ezi zigulo zimbini ngokucacileyo. Ukusebenziseka lula Kwenziwa lula kwaye kutolikwa zii-personnels zokhathalelo lwempilo. Ukugcinwa kwegumbi lobushushu ...
Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid, H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi, ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket,